सुरुवाती समयमा उपचार नपाउने भएकाले नेपालमा धेरै क्यान्सर बिरामीको मृत्यु हुन्छ | Ratopati
सरकारले दिएको १ लाखले आधाअधुरो उपचार गरेर क्यान्सर रोगी घर फर्किन्छन् : डा. वीरेन्द्रकुमार यादव
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २२, २०७७ chat_bubble_outline0
आज विश्व क्यान्सर दिवस । हरेक वर्षको फेब्रुअरी ४ तारिखका दिन, संसारभर क्यान्सरसँग लडनका लागि जनचेतना फैलाउने तथा ऐक्यवद्धता जनाउने दिन पनि भनेर चिनिन्छ । नेपालीमा क्यान्सरलाई अर्बुदरोग भनिन्छ । क्यान्सर भनेको के हो, किन नेपालमा क्यान्सर बिरामीको मृत्युदर बढी छ ? क्यान्सर रोगीलाई सरकारले दिने १ लाख रकमले पुग्छ ? क्यान्सर रोगको जोखिम के के हुुन् लगायतका सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर वीरेन्द्रकुमार यादवसँग माया श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ः
क्यान्सर भनेको के हो ?
क्यान्सर एक किसिमको जटील रोग हो । यो रोगमा शरीरलाई नचाहिने कोशिकाहरू अनावश्यक वृद्धि भएर ढिक्का भएर बस्छ । त्यस्तै एक अंगबाट अर्को अंगमा कोशिकाहरू जाने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस अवस्थालाई क्यान्सर लागको भनिन्छ । क्यान्सर लागेको अंगमा बढेको अनावश्यक कोशिका नसाको माध्यमबाट अन्य अंगमा पुगेर त्यहाँ पनि अनावश्यक रुपमा कोशिकाहरूको विकास हुन थाल्छ । क्यान्सर भएको खण्डमा त्यो अंगलाई त खराब गर्छ नै, त्यसपछि उपचार नगरेको खण्डमा रगतको माध्यमबाट अन्य अंगहरूमा समेत फैलिएर तिनलाई पनि खराब गर्छ । वास्तवमा, शरीरमा भएका कोशिकालाई अनियन्त्रित बनाउने तत्त्व नै क्यान्सर हो ।
क्यान्सर लागेको अंगमा बढेको अनावश्यक कोशिका नसाको माध्यमबाट अन्य अंगमा पुगेर त्यहाँ पनि अनावश्यक रुपमा कोशिकाहरूको विकास हुन थाल्छ । क्यान्सर भएको खण्डमा त्यो अंगलाई त खराब गर्छ नै, त्यसपछि उपचार नगरेको खण्डमा रगतको माध्यमबाट अन्य अंगहरूमा समेत फैलिएर तिनलाई पनि खराब गर्छ ।
शरीरको कोशिकालाई अनियन्त्रित बनाउने तत्व चाहिँ भनेको के हो ?
शरीरमा कोशिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हुन्छ । क्यान्सर भएको खण्डमा कोशिका अनियन्त्रित हुन्छ । कुनै कोशिका म्युटेसन भएर अनियन्त्रित हुन्छ । अनियन्त्रित कोशिकालाई रोक्ने प्रणाली असफल हुन्छ । त्यसपछि कोशिकाहरू अनावश्यक रूपमा वृद्धि भएर लाखौं करोडौं बन्दै गएपछि ट्युमरको रूप लिन्छ । ट्युमरको रूप लिइसकेपछि शरीरले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्दैन । नसाको माध्यमबाट त्यो अर्को अंगमा गएर बस्ने तथा त्यहाँ पनि कोशिका बृद्धि हुने जस्ता प्रक्रिया बढ्दै जाँदा यसले शरीरका फरकफरक अंगहरूलाई हानी पुर्‍याउँछ । त्यसपछि शरीर गर्ने सामान्य अवस्थाका नियमितकार्यलाई अवरुद्ध गरेर अनावश्यक रुपमा बढेका कोशिकाले गम्भिर रूपमा असर पुर्‍याउँछ ।
पछिल्लो समय क्यान्सर बिरामी बढ्दै गएका छ, क्यान्सर बढाउने तत्त्वहरू केके हुन् ?
क्यान्सर बनाउने कारक तत्वहरू भनेर शत प्रतिशत थाहा हुँदैन । तर, क्यान्सरको जोखिम उत्पन्न गराउने तत्त्वहरूका बारेमा भन्न सकिन्छ । कोशिकाहरूको अनावश्यक वृद्धि विकास गर्ने प्रमुख कारणमध्ये एक वंशाणुगत पनि हो । वशाणुगत रुपमा क्यान्सर हुने सम्भावना १० देखि १५ प्रतिशत हुन्छ । आमाबुवालाई क्यान्सर छ भने जीनमा म्यूटेसन भएर सन्तानमा पनि सो रोग देखिन सक्छ । जीवनयापन गर्ने शैलीले पनि क्यान्सर हुन्छ । जस्तै सूर्तीजन्यपदार्थको सेवनलाई क्यान्सर लगाउने मुख्य तत्त्वको रूपमा लिनुपर्छ । सूर्तीजन्य पर्दाथ चुरोट, तमाखु, गुडखा, खैनी, सूर्ती, सुपारी सेवनले पहिला निश्चित अंग जस्तै मुखमा असर गर्छ । यी सूर्तीजन्य पर्दाथ सेवन गर्दा कुनै एक अंगमा असर देखिसकेपछि म्यूटेसन भएर लामो समयपछि कुनै बेला निको नै नहुने अवस्था आउँछ ।
ह्युम्यान प्यापिलोमा भाइरस Human papillomavirus (HPV) को संक्रमणले सबैभन्दा बढी महिलाहरूमा पाठेघरको क्यान्सर र पुरुषमा मुख, लिंगको क्यान्सर हुन्छ । ह्युम्यान प्यापिलोमा भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा यस किसिमका क्यान्सरलाई निको पार्न तथा कम गर्न सकिन्छ ।
यस्तै रक्सीको सेवनले आन्द्रा, आमाशय, खाना बस्ने आन्द्रा, मुख, घाटीमा लगातार असर देखिएपछि क्रमश क्यान्सरको रूपमा देखापर्छ । यस्तै संक्रमणले पनि क्यान्सर हुन्छ । ह्युम्यान प्यापिलोमा भाइरस Human papillomavirus (HPV) को संक्रमणले सबैभन्दा बढी महिलाहरूमा पाठेघरको क्यान्सर र पुरुषमा मुख, लिंगको क्यान्सर हुन्छ । ह्युम्यान प्यापिलोमा भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा यस किसिमका क्यान्सरलाई निको पार्न तथा कम गर्न सकिन्छ । लामो समय ग्यास्ट्रिकको समस्या भएमा संक्रमणका कारण क्यान्सर हुन सक्छ । अस्वस्थकर खानपान, जस्तै पोलेका खानेकुरा, प्याकिङ गरेका पत्रु खानेकुरा खाने बानी, शारीरिक अभ्यास नगर्ने, मोटोपन जस्ता कारणले पनि क्यान्सरको जोखिम बढाउने गर्छ ।
नेपालमा क्यान्सरका कारण मृत्यु हुनेको संख्या किन बढी भएको हो ?
नेपालमा गएको ५ वर्षको अवधिमा सक्रिय क्यान्सर बिरामी ६० देखि ८० हजार छन् । प्रत्येक वर्ष २० देखि २५ हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिन्छ । जसमध्ये १० देखि १२ अर्थात ७७ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुन्छ । समयमै उपचार नपाएर, पहुँच नपुगेर, आर्थिक अभावले बिरामीको मृत्यु हुन्छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा क्यान्सरको कारण मृत्यु हुनेको संख्या धेरै छ । किनभने बिरामी औषधि उपचार गर्न क्यान्सर भएको तेस्रो, चौंथो स्टेजमा आउँछन् । नेपालले क्यान्सरसम्वन्धी जनचेतना पूर्ण रूपमा फैलाइएको छैन । जसले गर्दा मृत्युदरपनि धेरै छ । विकसित मुलुकहरूमा क्यान्सरको मृत्युदर ३० प्रतिशत मात्रै छ । त्यहाँ ३० हजार क्यान्सरका बिरामी छन्भने ६ देखि ७ हजारको मृत्यु हुन्छ । नेपालमा ३० हजार बिरामी छन् भने १२देखि १५को मृत्यु भएको पाइएको छ । विश्वमा करिब क्यान्सरका बिरामी २ करोड छन् । तर, एसियाका राष्ट्रहरूमा मात्रै झण्डै ८०–८५ लाख क्यान्सरका बिरामी छन् ।
नेपालमा क्यान्सरका बिरामी उपचार गर्न धेरै ढिला आउँछन् । त्यसपछि क्यान्सरको बिरामीलाई उपचार गर्ने पूर्वाधार तथा अस्पताल ज्यादै न्यून पनि भएकाले पनि नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या बढी छ । एउटा बिरामीले उपचार गराउन ३–४ महिना कुर्नुपर्छ
नेपालमा क्यान्सरका बिरामी उपचार गर्न धेरै ढिला आउँछन् । त्यसपछि क्यान्सरको बिरामीलाई उपचार गर्ने पूर्वाधार तथा अस्पताल ज्यादै न्यून पनि भएकाले पनि नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या बढी छ । एउटा बिरामीले उपचार गराउन ३–४ महिना कुर्नुपर्छ । यसरी बिरामीले उपचारको पालो पर्खदा क्यान्सर तेस्रो–चौथो चरणमा पुगिसकेको हुन्छ । बिरामीले सुरुवाती समयमा उपचार नपाउने भएकाले नेपालमा धेरै क्यान्सर बिरामीको मृत्यु हुन्छ ।
क्यान्सर दिवस मनाउनुको औचित्य के हो जस्तो लाग्छ ?
यही एकदिन हो हामीले सबै निकायलाई क्यान्सरको विषयमा झक्कझकाउने र आकर्षित गर्ने । यस दिन ती बिरामीको लागि के गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता नीति, योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसको अवस्था कस्तो छ, के के उपलब्धि भए भनेर समीक्षा गर्ने दिन पनि हो । क्यान्सर दिवसका नारा नै ‘हामीले गर्न सक्छौं’ छ । यो भनेको हामी क्यान्ससँग लड्न सक्छौं, हामीले क्यान्सरका बारेमा बृहतरूप जनचेतना फैलाउन सक्छौँ, बिरामी चाँडै उपचारको पहुँचमा आउनुपर्छ भनेर क्यान्सर दिवसलाई प्राथमिकता दिएमा यसको औचित्य पनि हुन्छ । नागरिक, सरोकारवाला, सरकार सबैले सहकार्य गरेको खण्डमा क्यान्सरलाई जित्न सक्छौं भन्ने यस दिवस उद्देश्य पनि हो ।
सरकारकाले उपलब्ध गराएको १ लाखले सरकारी अस्पतालमा क्यान्सको उपचार गर्न सम्भव छ ?
क्यान्सर भनेको क्रोनिक रोग हो । कुनैपनि क्यान्सरलाई उपचार गर्न अस्पतालमा ६÷८ महिना बस्नुपर्ने हुन्छ । लगातार उपचार हुन्छ, सर्जरी, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी लगायतका उपचार विधि हुन्छन् । त्यसको फलोअफमा बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई उपचार गर्न दिएको १ लाख ज्यादै न्यून रकम हो । क्यान्सर बिरामीको उपचार गर्न १ लाख रुपैयाँले भ्याउँदैन । क्यान्सर उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालहरूमा धेरै सुविधाहरू पनि छैन । क्यान्सरको उपचारका लागि औजार–उपकरणहरु महँगा छन् । औषधि महँगो छ, कुनै कुनै अवस्थामा जनशक्ति विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसैले समग्रमा हेर्दा क्यान्सरको उपचार महँगो पर्न जान्छ । सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई दिएको एकलाखले धेरै बिरामी आधाअधुरो उपचार गरेर घर फकिन्छन् ।
नेपाल सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई उपचार गर्न दिएको १ लाख ज्यादै न्यून रकम हो । क्यान्सर बिरामीको उपचार गर्न १ लाख रुपैयाँले भ्याउँदैन । क्यान्सर उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालहरूमा धेरै सुविधाहरू पनि छैन ।
क्यान्सरको पहिचान कसरी छिट्टै गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा क्यान्सरको बेलैमा पहिचान गरेर मृत्युदरलाई घटाउँन सकिन्छ । महिलाको पाठेघर, छातीको क्यान्सरलाई समयमै पहिचान गरेको खण्डमा महिलाको मृत्युदर करिब ६० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ । छातीमा एक सेन्टिमिटरसम्मको गाँठोलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ । पाठेघरको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडिको सिआइएन भनिने चरणलाई पत्ता लगाउँन सकेको खण्डमा मृत्युदर कम हुन्छ । छातीको लागि मेमोग्राम हो, क्लिनिकल परीक्षण हो, वा पाठेघरका लागि प्याप स्मियर वा प्याब टेस्ट (Pap smear, also calledaPap test) (यौनाङको स्रावको परीक्षण) वा भिआइए परीक्षण (Visual inspection with acetic acid (VIA))हो । महिलाहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको पहिचान गर्न यी परीक्षणमा जोड दिनुपर्छ । पुरुषले चुरोट खाएको १२–१३ वर्ष भएको छ भने, दिसामा रगत आएमा, ५० वर्ष पुगेपछि कोलोनोस्कोपी आदि गरेर रोग पहिचान गर्न सकिन्छ । जस्तै जोखिम समूहमा रहेका एउटा उमेर समूह पार गरेकाहरूको परीक्षण गराउनुपर्छ । त्यसबारे निर्देशिका नै पनि छ । जस्तै महिलाहरूले ४० वर्षको उमेर पार गरेपछि एउटा मेमो गराउने, प्यापटेस्ट गर्ने, ४५ वर्ष पुगेपछि पुरुषहरूले कोलोनोस्कोपी गराउनुपर्छ । यस्ता कुरा अपनाएको खण्डमा नेपाल क्यान्सरको मृत्यु दर घटाउन सकिन्छ । क्यान्सर रोगी बढ्न नदिनका लागि सरकारले जनचेतना फैलाउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । स्क्रिनिङ कार्यलाई हरेक जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्छ, उपचारलाई आर्थिक रुपमा सम्भव बनाउन स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य रूप गराउन सुरु गर्नुपर्छ ।